FJKM Ankadindramamy Fahazavana » admin
Ry havana malala, Ampitomboin’Andriamanitra amintsika mandrakariva anie ny Fiadanan’i Jesoa Kristy Tompontsika Miarahaba antsika rehetra izay mitsidika ity tranokalam-pifandraisantsika FJKM Ankadindramamy Fahazavana ity. Efa naseho hitantsika eto ny fandaharam-potoana...
Isaorantsika Andriamanitra noho ny fitondrany sy fitantanany ny fiainantsika, ny fiainan’ny Fiangonana. Isaorantsika Izy noho ny Fitahiana rehetra nomeny antsika nahafahantsika nanatanteraka ireo tetik’asa nofaritana tamin’iny taona 2014 iny . Teo ny asan’ny Fiangonana, ny...
Amin’ny fifaliana no iarahabana antsika zanaky ny FJKM Ankadindramamy Fahazavana nahatratra izao taona vaovao 2015 izao. Ny fitahiana avy amin’ny Tompo anie ho amintsika rehetra. Tsarovy fa matoa isika nahazo taona vaovao dia famindram-po sy fitiavan’Andriamanitra antsika izany....